नयाँ १८९ थपिए, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १,४०१ पुग्यो, घर फर्किनेको संख्या २१९ – Online Annapurna
नयाँ १८९ थपिए, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १,४०१ पुग्यो, घर फर्किनेको संख्या २१९
१७ जेष्ठ २०७७, शनिबार १२:३३ May 30, 2020 49 Views
आरजू/अनलाइनअन्नपूर्ण/पोखरा, जेष्ठ १७
नेपालमा कारोनाभाइरसबाट संक्रमति हुनेको संख्या १ हजार ४०१ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाले आज एकैदिन १८९ जना कोभिड १९ का नयाँ संक्रमित पुष्टि भएसंगै संक्रमितको संख्या १ हजार ४०१ पुगेको मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार नयाँ थपिएका संक्रमितहरुमा १८५ जना पुरुष र ४ महिला रहेका छन् । राष्ट्रिय प्रयोगशाला काठमाडौंमा गरिएको परिक्षणमा १२४ जनाको नतिजा पोजेटिभ देखिएको छ । उनिहरु धनुषाका २० देखि ४२ वर्ष उमेरका ७ जना पुरुष रहेका छन् । झापामा एक ४५ वर्षका पुरुषमा पोजेटिभ देखिएको छ । कपिलवस्तुका ७७ जना पुरुषमा संक्रमण पोजेटिभ देखिएको प्रवक्ता डा. देवकोटाले बताउनु भयो । उनिहरुको उमेर समूह १६ देखि ६० वर्षको रहेको छ ।
उपत्यकाको ललितपुरमा एक २३ वर्षिया युवतीमा संक्रमण देखिएको छ । महोत्तरीमा ४ पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ । उनिहरु २५ देखि ५५ वर्ष उमेरका रहेका छन् । रौतहटका ६ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ । उनिहरु १८ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका रहेका छन् । सर्लाहीका १७ जना पुरुषमा पोजेटिभ देखिएको छ । उनिहरु १६ देखि ४० वर्ष उमेरका रहेका छन् । सिराहाका ११ जना पुरुषमा संक्रमण पोजेटिभ देखिएको छ । उनिहरुकोे उमेर समूह १७ देखि ४० वर्षको रहेको छ ।
रुपन्देहीको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परिक्षणमा २६ पुरुषमा संक्रमण पोजेटिभ देखिएको प्रवक्ता डा. देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ । उनिहरु कपिलवस्तु यशोधराकाका १६ देखि ५० वर्ष उमेरका रहेका छन् ।
उता धरानस्थित वीपी कोराइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परिक्षणमा ८ पुरुष र १ महिलामा संक्रमण पोजेटिभ देखिएको छ । उनिहरु १८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका रहेका छन् ।
प्रदेश ५ को दाङस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको परिक्षणमा एक महिलासहित ८ जनामा पोजेटिभ देखिएको छ । उनिहरुमा विजयनगर कपिलवस्तुका २६ देखि ५२ वर्षका ३ जना रहेका छन् । यस्तै हापुर दाङका ३० वर्षिय पुरुष, दाङ बगलाचुरीका ४ जना २७ देखि ३८ वर्षका पुरुष र एक महिला रहेकि छन् ।
यस्तै नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा गरिएको परिक्षणमा २ महिला र १ पुरुषमा पोजेटिभ देखिएको छ । उनिहरु बारा हर्दियाका २४ वर्षिय पुरुष, पर्सा बसौनीका २ जना १८ र ६० वर्षिय महिला रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा गरिएको परिक्षणमा १४ जना पुरुषको नतिजा पोजेटिभ देखिएको छ । उनिहरुको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिक्षण गरिएको थियो । संक्रमितहरु सबै दैलेख जिल्लाका हुन भने उनिहरुको उमेर समूह १४ देखि ५० वर्ष रहेको छ ।
कोशी अस्पताल विराटनगरमा गरिएको परिक्षणमा २ जनाको पोजेटिभ देखिएको छ । उनिहरु संखुवासभा खाँदवारीका २३ र पाँचकपनका २२ वर्षिय पुरुष रहेका छन् ।
नेपालमा आजसम्म संक्रमति भएका १ हजार ४०१ मध्य १ हजार २८८ जना पुरुष रहेका छन् भने ११३ जना महिला रहेका छन् । संक्रमित मध्य २१९ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने हालसम्म ६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट ६६ हजार ७२९ जनाको परिक्षण गरिएको छ । आरडीटी विधिबाट १ लाख ७ हजार ५५ जनाको परिक्षण गरिएको छ । बितेका २४ घन्टामा २ हजार ७५७ जनाको पीसीआर परिक्षण भएको छ । यस्तै देशभर १ लाख १० हजार ७८ जना क्वोन्टाईनमा रहेका छन् भने १ हजार १७६ जना आईसोलेसनमा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।